Ividiyo - Wikipedia
Ividiyo iyindlela esebenza ngogesi yokuqopha, ukukopisha, ukudlala, ukusakaza, nokukhombisa imidiya ebonakalayo ehambayo.Ividiyo yaqale yathuthukiselwa izinhlelo zethelevishini ezenziwa ngomshini, ezathathelwa indawo ngokushesha yizinhlelo ze- cathode ray tube (CRT) ezathi kamuva zathathelwa indawo ukuboniswa kwamapaneli ayizicaba ezinhlobo eziningana.
Kuvidiyo, amalungu eqembu abelana ngezinselelo <i id="mwHw">zemizuzu</i> yokugcina ye-Mars Science Laboratory 's (Curiosity) ukufika ebusweni beMars .
Izinhlelo zevidiyo ziyahlukahluka ekubonisweni kokuboniswa, isilinganiso sobukhulu, isilinganiso sokuqabula, amandla wombala nezinye izimfanelo. Ukuhlukahluka kwe-analog ne-digital kukhona futhi kungenziwa kwimidiya eyahlukahlukene, kufaka phakathi ukusakazwa ngomsakazo, itheyiphu kazibuthe, ama-disc optical, amafayela ekhompyutha nokusakazwa kwenethiwekhi .
Ividiyo ye-Analog isetshenziswa kuzo zombili izicelo zokukhiqiza zabathengi nezobuchwepheshe.
Digital isiqophi isignali nezakhiwo seyemukeliwe, kuhlanganise serial esibonakalayo digital (SDI), Digital Interface Visual (DVI), High soxhumanoningi oluchazayo (yocezuningi) kanye yokubonisa Interface.
I-serial interface yedijithali (SDI)
I-Digital Visual Interface (DVI)
Izindinganiso zokubonisa zekhompyutha zicacisa inhlanganisela yesilinganiselo, usayizi wokubonisa, ukulungiswa kwesibonisi, ukujula kombala, nezinga lokuvuselela.Uhlu lwezinqumo ezivamile luyatholakala.
Iteyipu yekhasethi yevidiyo ye- VHS.
Ithelevishini yakuqala cishe yayiyindlela yokuphila bukhoma enezinhlelo ezithile ezirekhodwe ukuqoshwa ukuze kusatshalaliswe izinhloso zomlando kusetshenziswa iKinescope.I-analog video tape recorder yethulwa ngokokuhweba ngo-1951.Ngokulandelana okulandelanayo.Onke amafomethi abhalwe ohlwini athengiselwa futhi asetshenziswa abasakazi, abakhiqizi bamavidiyo noma abathengi; noma zazibalulekile ngokomlando (i-VERA).
"https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ividiyo&oldid=91283" تان ورتل
Last edited on 8 uNcwaba 2021, at 22:10
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-8 uNcwaba 2021, nge-22:10.